Noraràna vonjimaika nandritra ny fihetsiketsehana ny sehatra media sosialy tao Sri Lanka · Global Voices teny Malagasy
Noraràna nandritra ny 16 ora teo ireo sehatra media sosialy malaza
Voadika ny 09 Avrily 2022 5:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Română , Español, English
Sary tao amin'ny Pxfuel. Azo ampiasaina maimaim-poana amin'ny ara-barotra na tsia.
Nitatitra ny NetBlocks, mpanaramaso ny Aterineto maneran-tany ny harivan'ny Alahady 3 Aprily 2022 fa naverina tamin'ny laoniny ny fidirana amin'ireo sehatra media sosialy lehibe (Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Viber sns.) ao Sri Lanka. Voaràra ny serivisy tamin'ny faramparan'ny 2 aprily ora teo an-toerana. Nitranga izany taorian'ny nanambaran'ny Filoha Gotabaya Rajapaksa ny fanjakana latsaka an-katerena tamin'ny 1 Aprily, nanome hery lehibe ho an'ny mpitandro ny filaminana. Mitombo hatrany ny hetsi-panoherana ao amin'ny firenena mitaky ny fametraham-pialàny noho ny krizy ara-toekarena mihatra. Napetraka ihany koa ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina maharitra adiny enina amby telopolo nanomboka tamin'ny 6 ora hariva. Tamin'ny 2 Aprily ka hatramin'ny 6 maraina tamin'ny 4 Aprily mba hanakanana ny fihetsiketsehana.
Miatrika krizy ara-bola faran'izay ratsy indrindra i Sri Lanka hatramin'ny nahazoany ny fahaleovantena tamin'ny taona 1948, tao anatin'ny fihenan'ny tahirim-bola vahiny. Niteraka fihetsiketsehana nieli-patrana ny fahatapahan-jiro, ny tsy fahampian-tsolika, ny etona ary ny fanafody, sy ny fiakaran'ny vidin-tsakafo. Araka ny nambaran’ny filoham-pirenena, dia ilaina ny fanjakana latsaka an-katerena mba hiarovana ny filaminam-bahoaka sy hiantohana ny famatsiana sy ny serivisy ilaina.
Hamaky bebe kokoa: Namely mafy tao Sri Lanka ny tsy fahampiana noho ny fihetsiketsehana ary mitady fanampiana amin'ny FMI ny governemanta
Nihamafy ny hetsi-panoherana ny governemanta Rajapaksa sy ny fianakaviana matanjaka Rajapaksa tamin'ny Alakamisy 31 martsa 2022, nitarika nankany amin'ny maraimben'ny 1 Aprily. Nanao diary ny fizotry ny toe-draharaha nanomboka ny 31 martsa ny sehatra fanaovan-gazetin'ny olom-pirenena Groundviews .
Bilaogera sady mpikatroka Amalini De Sayrah nisioka hoe:
Fiara mifono vy mandehandeha eny an-dalamben'ny renivohitra ao anatin'ny aizina, voaràra ny fidirana amin'ny vaovao mandritra ny alina, atahorana hosamborina ny olona raha mitabataba, lasa marefo kokoa ireo vondrona efa marefo.
Mifidy mpanao heloka bevava an'ady ianao, dia mahazo ‘ady’.
Tsy misy filazana mialoha
Nanomboka nahatsikaritra ny fanakanana ny media sosialy ny olona tamin'ny asabotsy alina. Mpikatroka sady akademisiana Sanjana Hattotuwa nisioka hoe:
Milaza ny tatitra tany am-boalohany avy amin'ny toerana maromaro fa mikorontana ny #Facebook ao #SriLanka. Mety hiharatsy haingana ny fidirana amin'ny vokatra/sehatra Meta. Mety ho ny voalohany amin'ireo sehatra media sosialy malaza hafa izay hosakanan'ny Govt ny fidirana aminy ao amin'ny firenena.
Nanamafy ny fanakanana tao amin'ny Twitter ny Netblocks:
⚠️ Voamarina: Asehon'ny angon-drakitra hita eo noho eo amin'ny tambajotra fa nampihatra ny fanakatonana ny media sosialy manerana ny firenena i Sri Lanka, mametra ny fidirana amin'ny sehatra toy ny Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube ary Instagram satria nambara tao anatin'ny fihetsiketsehana mielipatrana ny hamehana.
Ny sasany, toa an'i Yudhanjaya Wijeratne, mpahay siansa momba ny angon-drakitra, mpanoratra sady mpanara-maso ny zava-misy, nanana torohevitra marobe momba ny VPN hampiasaina hialàna amin'ny sakana:
Toa nosakanan'izy ireo ny @twitter, @facebook sy ny @whatsapp.#GoHomeRajapaksas
Eny ary, avelao aho hanome torohevitra ho an'ny olona manandrana miditra amin'ny aterineto
1) Aza misintona fampiharana VPN kisendrasendra. Mangalatra data ny ankamaroany. Raha mila zavatra tsara ianao dia mitroha TOR (https://t.co/dDsgY9nUcF). pic.twitter.com/AZ3EzS1zif
Mpanao sariitatra ara-politika ao Sri Lanka nisioka hoe:
“Tsy misy tokony atahorana! Azo antoka (ny misy) anao izao!!”
Sariitatra avy amin'i @dharshanaKa #Repost#lka #SriLanka #EconomicCrisisLK #SriLankaEconomicCrisis #SriLankaCrisis #SocialMediaBanLK #GoHomeRajapaksas pic.twitter.com/gc8lkbuLxy
Mpikaroka sady mpahay open source Pradeeban Kathiravelu nisioka hoe:
[Sri Lanka] Ao anatin'ny hetsika mahery vaika, hiadiana amin'ny tsy fitovian-kevitra, nosakanan'ny fitondrana Rajapaksa ny fidirana amin'ny media sosialy. Matahotra ny sivana mivantana amin'ny aterineto ihany koa ny mponina ao an-toerana.
Manan-jo hahazo vaovao ny olona. Nandrahona fepetra hentitra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana tsy miankina ny fitondrana.
Mifanohitra amin'ny lalampanorenana
Araka ny voalazan'ny Vaomiera Mifehy ny Fifandraisan-davitra (TRC-ang), nampiharina ny fandrarana noho ny fangatahana nataon'ny minisiteran'ny Fiarovam-pirenena.
Mpisolovava Gehan Gunatilleke nanontany hoe:
Ahoana no ahafahana milaza ny fandrarana feno ny media sosialy ho setrin'ny olona manao fihetsiketsehana am-pilaminana manohitra ny governemanta ho mitombina na mifanaraka?
Asongadin'i Gunatilekke ato amin'ity lohahevitra ity fa ny lalàm-panorenan'i Sri Lanka no mifehy ny fetran'ny fahalalahana maneho hevitra fa tsy ny Lalàna momba ny Fifandraisan-davitra Sri Lanka.
Nanamafy ihany koa ny mpisolovava N. K. Ashokbharan hoe:
Tsy vitany manitsakitsaka ny Andininy faha-14(1)(a) – Fahalalahana maneho hevitra ihany izany; fa amin'ny Andininy maro amin'ny faha-14(1)(g) – Fahalalahan'ny fibodoana [miasa amin'ny toerana iray], sy ny varotra izay miankin-doha amin'ny tambajotra sosialy ny fivelomany.
Tsy manana fahefana hametra ny Zo Fototra araka ny faniriany sy ny rendrarendrany ny Minisiteran'ny Fiarovana sy ny TRCSL.
Mandritra izany, Namal Rajapaksa, Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ao Sri Lanka ary zanaky ny Praiminisitra ankehitriny Mahinda Rajapaksa, nisioka hoe:
Tsy handefitra velively ny fanakanana ny media sosialy aho. Mahatonga ny fandraràna toy izany ho tsy misy ilàna azy mihitsy ny fisian'ny VPN, sahala amin'ny ampiasaiko ankehitriny. Mamporisika ny manam-pahefana aho mba ho liam-pandrosoana kokoa ara-pieritreretana ary handinika indray io fanapahan-kevitra io.
Na izany aza, nananihany an'i Rajapaksa ilay akademisiana Ishara Paranawithana, mampahatsiahy momba ny portfolio nampiany- Minisi-panjakana momba ny Teknolojia Nomerika sy ny Fampandrosoana ny Mpandraharaha:
Rehefa tsy fantatry ny minisitra hoe iza no manam-pahefana tompon'andraikitra! 😂😂😂
Asongadin'ny Vikalpa, sehatra fanaovan-gazety an'olom-pirenena, ireo feo manohitra :
”Atsaharo ny fanitsakitsahana ny fahalalahana maneho hevitra!!!” #srilanka #lka #SocialMediaBanLK #KeepitOn #EngageSMinSL @ActNOW_SL
Fihetsiketsehana ao anatin'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina
Tamin'ny Alahady 3 Aprily, hita fa nihantsy ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ao Kandy sy Colombo ireo mpanao fihetsiketsehana marobe mba hitaky ny fialàn'ny filoha. Nampiasa baomba mandatsa-dranomaso tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana teny amin'ny toerana maro ny polisy.
Na dia teo aza ny fandraràna ny media sosialy, nanohy nizara ny vaovao teny an-toerana tao amin'ny Twitter ireo mpanao gazety maro toa an'i Kavinthan Shanmugarajah:
Efa ho 24 ora taorian'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina sy ny ora tsy ampoizina no efa nipoaka tany amin'ny faritra maro ao amin'ny firenena ny fihetsiketsehana, na dia teo aza ny fametrahana ny Hamehana ho an'ny daholobe sy ny Fampitandremana Henjana. Sary avy amin'i Kohuwela mampiseho olona miaraka amin'ny zanany, tonga eny an-dalambe.
Sary mampiseho toerana nisy ny fatina lehilahy 53 taona izay voalaza fa tonga hihaona tamin'ny filoha tao amin'ny tranony tao Mirihana mba hitaky ny tsy fahatapahan'ny herinaratra, maty tamin'ny fandoròny ny tenany tamin'ny herinaratra niankika tamin'ny tamin'ny taribin'ny herinaratra avo teo akaikin'ny trano.
Taorian’ny fivoriana tamin'ny Alahady 3 aprily 2022 alina, nametra-pialana avokoa ireo minisitra 26 tao amin’ny kabinetran’i Sri Lanka. Na izany aza, mbola mitana ny fahefana ny praiminisitra Mahinda Rajapaksa sy ny filoha Gotabaya Rajapaksa rahalahiny. Ny alatsinainy izao no hanendry kabinetra vaovao ny governemanta.
India 7 ora izay